in qof ilkaha. Västmanlandd qoran xiriir laa leh takhtarrada xulan karto. Guud ahaan hagaajin kale u baahan. hoqidda ka bogsanayaa. - PDF
in qof ilkaha. Västmanlandd qoran xiriir laa leh takhtarrada xulan karto. Guud ahaan hagaajin kale u baahan. hoqidda ka bogsanayaa.
Download "in qof ilkaha. Västmanlandd qoran 021-17 53 30. xiriir laa leh takhtarrada xulan karto. Guud ahaan hagaajin kale u baahan. hoqidda ka bogsanayaa."
1 Warbixin ku saabsan fursada xulashada daryeelka hagaajinta ilkaha ee Gobolka Västmanlandd Adiga oo xulan doono qofka kuu dhaqaaqi doono daryee elka hagaajinta ilkahaaga Sidee baa loo kala xulan karaa? Waxaa halkaan ku qoran q warbixin ku saabsan daryeel- gobolka ee Gobolkaa Västmanland. Waxaa kaloo ku qoran warbixin kooban ku saabsan qaabka daryeelka ee kala duwan. Kaddib markii warbixinta aqrisato, waxaad Waaxda daryeelka ilkaha, Goleha ammuuraha Gobolka Västmanland wargelisa halka aad doonayso in ilkahaaga lagu hagaajiyo. Noocyada kala duwan ee daryeelka hagaajinta ilkaha Noocyada daryeelkaa guud ahaan waa laba: bixiyeyaasha oo heshiis la galay Goleha ammuuraha Hagaajiyeha ilkaha layska bixin karo waa hagaajiye afka laga soo saari karo lana nadiifin karo. Mararka qaarkoodd waxaa lagu isticmaala habeenkii oo keliya, mararka kalena habeenn iyo maalin. Hagaajiyeha ilkaha aan layskaa bixin karin la geliyo dhinaca kor ama hoose layska ma saaro. Waxaa kaloo loo yaqaanno räls. Mararka qaarkood waxaa loo baahan yahay in lagu isticmaalo labada nooc ba, kolka hore hal nooc kaddib nooca kale. Daryeelka noocaan ah markii u dhamaado, waxaa badi ahaan dhinaca dambe ee ilakaha la geliyaa dun ama qalab layska bixin karo, kaasoo ilkaha ku hayn doono halkooda, oona suurtagelin doonin in hagaajinta ilkaha kaddib ay halkooda ka dhaqaaqaan. Warbixin yar daryeelka ku saabsan iyo waxyaalaha muhimka ah ee u baahan in laga fekero Guud ahaan Xitaaa haddii lagu geliyo hagaajiyeha ilkaha, waa muhim inaadan ciribtirin xiriirkii aad takhtarka ilkaha la lahaan jirtay. Maxaayeelay, Takhtarka caafimaadka ilkaha wuxuu ka caawini karaa saarida ilig ama hagaajin kale u baahan. Goorta hagaajiyehaa lagu geliyo Xannuun fudud ayaaa ilkaha ka dareemi doontaa dhowr maalmood kaddib markii hagaajiyeha ilkaha lagu geliyo ama la hagaajiyo. h Taasoo caadi ah maadaama hagaajiyeha ilkaha u ilkaha kala guuro. 2-3 maalmood ee ugu horeeya ku talogal dhibaatada calaajinta iyo adkaynta afka. Mararka qaarkood waxaa dhacda in dhaawaca hagaajiyeha ilkaha, haddii ay dhacdo waxaa daawo la mariyaa dhinaca aad moodo afeefka ee e hagaajiyeha ilkaha, kaddib dhowr maalmood kaddib ayuu dhawaaca sababay hoqidda ka bogsanayaa. Nadaafadda N afka waa muhim Shuruudaha hagaajinta ilkaha waxaa kamid ah in qof u hab aad u taxadarsan ugu dadaalo daryeelka ilkaha. Waxyaalaha W adeeg ama dhegdhegga waxay hab fudud u qabsadaan hagaajiyehaa ilkaha, taasoo adkaynayso nadiifinta waxyaalaha qabsaday hagaajiyeha ilkaha waa haddii la l barbardhigo haddii qofku usan ugu rakibsanayn hagaajiyeha ilkaha. Sidaas awgeed, mudada u hagaajiyeha ilkaha ku rakibsan yahay ilkahaaga waa inaad hab aad u taxadarsan u nadiifisa afkaaga iyo i ilkahaaga ba. Magdhowga M kharashka socdaalka Iyadoo fiirogaar ah aan la siin nooca n hagaajiyeha ilkaha lagu rakibi doono, kuwa layska saari karo iyo kuwa aan layskaa saari karin ba, ayay labada nooc u baahan yihiin in 5:todobaad ilaaa 12:todobaad ba la kormeero. Daryeelku wuxuu socon karaa 1 ilaa 3 sannadood, mudadaas wuxuu qofku q u baahan yahay inn uu dhowr jeerr booqdo Takhtarka hagaajiyeha ilkaha. Magdhowga M kharashyada socdalka dibada Gobolka Västmanland V lama bixiyo, taasoo waafaqsan nidam hirgalay nofeembar Wixii W su aallo ahh oo ku saabsann magdhowga kharashka socdaalka kala xiriir Samtrafik, taleefan Takhtarrada hagaajiyo ilkaha oo heshiiss Goleha G ammuuraha gobolka la galay. Bogyada B soo soocda waxaa ku qoran warbixin xiriir laa leh takhtarrada hagaajiyeyaasha ilkaha ee aad kala xulan karto. Waa W in jawaabtaada aan 1 bil gudaheeda helna, tiriskaas laga sooo bilaabo maalinta warqadaan lagu siiyay. Haddii aadan kala xulann waxaa daryeelka hagaajinta ilkahaa ku dhaqaaqi doono d Waaxda gaar ahaan loogu daryeelo ilkaha ee isbitaalka,västmanlands Sjukhus. 1
2 Haddii su aallo aad ka qabto xulashada takhtarrada ilkaha hagaajiya waad noola soo xiriiri kartaa: Tandvårdsenheten [ daryeelka ilkaha] Landstinget Gobolka Västmanland Ing VÄSTERÅS Ewa Sandberg Carina Nydestedt Svensson Bogyada soo socda waxaad ka aqrisan kartaa warbixin kooban ku saabsan kuwa aad kala xulan karto. Maadaama aysan u kala horeyn hab gaar ah, ayaa waxaa kula talinaynaa inaad gogoldhigyda sii fiican u aqrisato kahor go aanka xulashada. Bogga ugu dambeeyo waa foomka aad xulashada awgeed adeegsan karto, oo kaddib anaga noo soo diri karto adigoo adeegsanaayo baqshada ku lifaaqan. 2
3 Adress Taleefan Tandreglering Specialisttandvården Västmanland, Västerås iyo Köping Box Västerås Shabakadda internetka: Isbitaalka Västerås Sjukhus albaabka 27, dabakhada 3 Dhismaha ka tirsan: Glasgatan 27, Köping Tal: Faks: Hawlwadeneyaasha Takhtarrada ilkaha hagaajiya: Kjell Enberg (agaasimeha) Annica Gustafsson Azam Hosseini Klara Jelinek Holmberg Tine Mollerup Andreas Mollerup Khibrad-xirfadeed Arrinta kale Badidooda waxay leeyihiin khibrad-xirfadeed oo sannooyin tiro badan ah Af-iswiidish, af-ingriisi, af-finish, af-tjeck, af-syris, af-carabi, af-jarmal, afhangari iyo af-danish. Goobaha waa goobo itaaldarrada loogu talagalay, waxayna hawlaheenna ku salaysan yihiin deegaan wanaagga firfircoon. Waaxda gaar ahaan loogu daryeelo ilkaha waxay ku taalla isbitaalka, Västmanlands Sjukhus, wuxuuna dhisme ku leeyahay isbitaalka Köpings Sjukhus. Labada waax boqolkiiba boqol waa casri waxaana ka hawlgalla shaqaale kartixirfadeed heer sare leh. waxay leedahay dhaqanka la wada-shaqaynta aqoonyahanka daryeel-caafimaadeedka ilkaha oo heer sare ah iyo daryeelcaafimaadeedka ilkaha ee dadwaynaha. waxaa ka hawlgala lex takhtarro oo ku takhasusay daryeelka noocan ah iyo 11 qof oo kalkaaliyeyaal ah, kuwaasoo gaar ahaan loogu soo tababaray hawlgallada kala duwan ee xiriirka la leh daryeelka hagaajinta ilkaha ee kala duwan. Waxaa ku dadaalna in mar kasta aan bukaan-socodka siinno mudnaanta koowaad, waxaana adeegsanaa qalabyada ugu wanaagsan ee suuqa. wuxuu toddobaad kasta leeyahay kulanka daawaynta, oo aan ka arrinsanaa xaaladaha daawayntooda ay culus yihiin. Goorta u baahanno waxaan kaloo leenahay fursad aan kula tashanno takhtarrada ka hawlagala laamaha daryeel-caafimaadeedka ilkaha ee aqoonta gaar u leh hagaajinta ilkaha. Waxaan leenahay tixraaca tayada oo joogto ah iyo su aallo waydiimo bukaan-socod sida aan u ogaanno heerka bukaan-socodyada ay ku qanacsan yihiin daryeelka. Maadaama wada-shaqayn heer sare naga dhaxayso daryeel-caafimaadeedka ilkaha ee dadwaynaha waxaan iyaga naga caawini karaan daryeelada qaarkood sida kuwa saabsan hagaajiyeha layska saari karo. Xilliga sugitaanka daryeelka waa sagaal bilood. 3
4 Östermalms Tandreglering Artillerigatan Stockholm Artillerigatan Stockholm Taleefan Tal Hawlwadeneyada Takhtarrada ilkaha hagaajiya: Johan Karsten Khibradxirfadeed 20 sannadood khibrad u leh hagaajinta ilkaha Af-iswiidish, af-ingriisi iyo af-finish. waxay ku taalla wadada Artillerigatan, agagaarka Östermalmstorg, hal isteeshan Centralstation. wuxuu tan iyo markii sannadka u ahaa 1995 wakhti buuxa daryeeli jiray hagaajinta ilkaha. Dhaqdhaqaaqa wuxuu bilaawday 1967 wuxuuna ka tirsanaa shirkadda Praktikertjänst AB 30 sano ee ugu dambeeyay. Dhammaan kooxaha bukaan-socodyada waa la daryeela, carruur iyo dadka waawayn ba oo u dhiban nooc kasta oo ah cilladda qaniinka, kuwa iyaga kharashka iska bixiya iyo kuwa Goleha ammuuraha gobolka Stockholm. wuxuu tan iyo 1995 xiriir la lahaa Goleha ammuuraha gobolka Stockholm. Astamaha dhaqdhaqaaqa u gaarka ah waxaa weeyaan daryeel tayo heer sare leh xilka guurida ilkaha takhtar kale ma saarna ee waxaa fuliyaa takhtarrada ilkaha hagaajiya, iyagoo farsammo casri ah adeegsanaayo maadaama xilliyada daryeelida ay kala fog yihiin, waxaa la daryeeli karaa bukaan-socodyada degan degmooyin fogfog. Hawlaha tayada leh waxaa loo fuliyaa hab waafaqsan nidaamka shirkada Praktikertjänsts iyo Goleha ammuuraha gobolka Stockholm u degsan. 4
5 Tandregleringen City Folktandvården Sörmland AB Kungsgatan 21A Eskilstuna E:mail: Shabakadda internetka Kungsgatan 21A Eskilstuna Taleefan Faks: Hawlwadeneyada Khibrad-xirfadeed Takhtarrada ilkaha hagaajiya: Torsten Frost, agaasimeha Margitha Björksved Claudia Benavente Lundahl Anna-Karin Hägglund Svensson Margareta Sörensen Maria Wikén Waxaan leenahay imminka 6 qof takhasus Takhtarka caafimaadka ilkaha u shaqeeya, kuwaasoo badidooda leh sannooyin badan oo khibrad ah. Waxaa kaloo ka hawlgala 9 kalkaaliyeyaal, dhammaantood leh in ka badan 10 sannadood oo khibrad u leh Af-iswiidish, af-ingriisi, af-danish, af-finish, af-isbaanish, af-taliyaani, af-bersi, iyo inyar af-jarmal waxaa albaabada loo furay 2009 waxayna ku taalla bartamaha magaalada Eskilstuna wadada Kungsgatan. Tareen isteeshanka waxay u jirta qiyaastii ca 4-5 daqiiqo socod, halka baaska u ka dhaqaaqo qiyaastii 2 daqiiqo. waxay ku taallaa dabaqada 2:aad dusha halka dukaamada magaalada ay ku yaalaan, wuxuu dhismaha leeyahay wiish. Baabuurada waxaa la dhigan karaa goobta ku Vildsvinet oo saddex daqiiqo socod u jirta ama goobta baabuurada la dhigto ku myntverket qiyaastii 3 daqiiqo socod u jirto. Waxaan kliinikadeenna sannad kasta ku daryeelnaa bukaan-socod. Dhammaan kooxaha bukaan-socodyada waa la daryeela, carruur iyo dadka waawayn ba oo u dhiban nooc kasta oo ah cilladda qaniinka. Kuwa anaga noolugu soo wareejiyay daahid la aan ayaan ugu yeerna. Labadii toddobaad ba waxaanu leenahay kulanka daryeelka, waxaan goortaas wadajir takhtarro kale oo aqoon gaar leh la qorsheynaa oona la arrinsanaa. Waxaan leenahay wadashaqayn heer sare oo joogto ah. Waxaan mudnaanta koowaad siinaa bukaansocodka iyo waxaan ku hawlgalnaa qalabyada suuqa ugu casriyeeysan. Waxaa kharsha yar nalagu heli karaa ku dhejin qurux ku salaysan. Hawlwadeneyada kliinikada waxay qabtaan farsammada ilkaha qaarkood, taasoo soo gaabinayso xilliga sugitaanla oona hoos u dhigayso tirada bukaan-socodka. waxay haysata shahaadada deegaan-wanaaga. 5
6 Tandregleringen Enköping Folktandvården Uppsala län Västra Ringgatan Enköping E:mail: Shabakadda internetka: /Tandregleringen-Enkoping/ Västra Ringgatan Enköping Taleefan Hawlwadeneyada Takhtarrada ilkaha hagaajiya: Lena Berglund Stevenberg Jari Taghavi Åsa Stegelius Ruzbeh Sadegh Khibradxirfadeed Af-iswiidish, af-ingriisi, af-bersi iyo af-syri hagaajinta ilkaha waxay ku taallaa bartamaha magaalada Enköping iyo hab fudu ayaa lagu tegi karaa haddii laga dhaqaaqo degmooyinka agagaarkeeda ku yaalaan, oona la adeegsado baas am baabuur. Isteeshanka baaska Gustav Adolfs wuxuu u jira qiyaasti 1 daqiiqo socod. Waxaan leenahay goobo dhowaan la dayactiray kuna rakiban qalabyada xasuus-qorka bukaan-socodka iyo raajada oo farsammada kombyuutarka ku salaysan. Kliinika waxay haysata shahaadada deegaan wanaaga iyo waxaana hab joogto ah u hawlgala hab hoos loogu dhigo waxyeelka deegaanka. wuxuu haysta shahaada HBT oo ah in qof kasta loola dhaqmo hab siman iyadoo fiirogaar la siin jinsiga u qofku ka tirsan yahay. Waxaan ku dhaqaaqna tixraacid joogto ah oo ku salaysan qaabka daawayntayda iyo kormeerida tayada natiijada daawayntayda sida hadba waafaqsan hab-dhiska caalamiga, ESAS. Hawlwadeneyada kliinikada waxay qabtaan farsammada ilkaha qaarkood, taasoo soo gaabinayso xilliga sugitaanka oona hoos u dhigayso tirada bukaan-socod. waxaa lagu qabta dhowr qorshe cilmibaaris. Kormeerkii oo aan anaga hagaajinta ilkaha Enköping qabanay 2011 boqolkiiba 99 % way ku qanacsanayeen natiijada daawaynta iyo habka loo qaabilay. Waxaan daryeelna carruurta iyo dadka waaywayn ba. Waxaa wadashaqayn naga dhaxayso ama la hawlgalna takhasusyaal kale ka hawlgala Goleha ammuuraha gobolka Uppsala iyo gobollada deriska. 6
7 RB Tandreglering och Tandvård AB Drottninggatan 1B Uppsala E:mail: Webplats: Drottninggatan 1B Uppsala Taleefan Faks: Hawlwadeneyada Takhtarrada ilkaha hagaajiya: Rusalin Bajka Kalkaaliyeyaasha: Annica Düring Margareta Höijer Khibradxirfadeed 19 sannadood khibrad u leh dhaqdhaqaaqa hagaajinta ilkaha Af-iswiidish, af-ingriisi, af-serbo, af-kroat, af-romani waxay ku taalla bartamaha magaalada Uppsala, dabaqada ugu sarayso daarta Skandiahuset halkaasoo ka muuqata Qasrada, Domkyrkan iyo Fyrisån. waxay ku taallaa gooob 10 daqiiqo isteeshanka tareenka Uppsala u jirta iyo qiyaastii 40 daqiiqo garoonka dayuuradaha Arlanda. Agagaarka waxaa laga hela fusado fiican oo baabuurada la dhigto. Dhammaan bukaan-socodyada noola soo gudbiyay daahid la aan ayaan hagaajinta ilkaha dartood ugu yeerna. Hawlwadeneyaada kliinikada waxay adeegsadaan kuna hawlgalaan kuwa ugu casriyeeysan, isla markaas adeegsataa habka hagaajinta ilkaha ee aad loo soo tijaabiyay ku salaysan daawaynta aan khabiirka ku nahay. Hab-dhiska tayada/hogaaminta waafaqsan Qulan ayaa kliinikada laga hirgeliyay. Qoraal-waydiimaha bukaan-socodyada waafaqsan SwedeQual ayaa goorta ka saarida qalabyada hagaajinta ilkaha, iyo hal sano kaddib markii daawaynta la dhameeyo ayaa la siiyaa bukaan-socodka. Sidaas ayaa ujeedada ugu yaraan boqolkiiba 95 hagaajinta ilkaha, hal sano kaddib soo bandhiga qaniinin fiican iyo dhinaca quruxda najiido la qaadan karo. Nidaam lagu qaabilo bukaan-socod u baahan daryeel degdeg wuu leeyahay waana la hirgeli karaa markii baahi ay jirto. Teeda kale, waxaa kliinikada yaallo boorsada la adeegsado markii xaalad degdeg aj jirto iyo aaladda oksijinka. Waxaa jiro wadashaqaynta iyo takhtarrada takhasus ka hawlgala FTV/ LUL iyo Uppsala Käkkirurgiska Centrum (UKKC), ujeedada waxay tahay in qaabilaadda heerka sare ee bukaan-socodyada kaasoo dhaafsan xadadka khabiirnimada. 7
8 Colosseumkliniken Arboga Storgatan Arboga E:mail: Webplats: Storgatan Arboga Taleefan Hawlwadeneyada Takhtarrada ilkaha hagaajiya: Thomas Örtendahl Khibradxirfadeed Wuxuu 19 sanadood ahaa agaasimeha dhaqdhaqaaqa daryeelka hagaajinta ee dadwaynaha, tan iyo 1989 iskiisa ayuu u shaqaysta. Wuxuu imminka Koox-shirkadeedka Colosseum ka yahay agaasimeha hagaajinta ilkaha. Af-iswiidish, af-ingriisi, af-jarmal, turkiska, asaf-syris, af-carabi iyo affinish Isniin - Khamiis , Jimce Goob baabuurrada la dhigto oo lacag la aan ah ayay leedahay. waxay ka tirsan tahay Koox-shirkadeedka Colosseum oo Waqooyiga Yurub ku leh 24 waax. degmada Arboga iyo dhaqdhaqaaqa hagaajinta ilkaha bilaawdeen xilliga dayrta Daryeelka waxaa fuliyaa qof takhasus oo in ka badan 20 sannadood khibrad daryeelka u leh. Dhammaan kooxaha bukaan-socodyada waa la daryeela, carruur iyo dadka waawayn ba oo u dhiban nooc kasta oo ah cilladda qaniinka, kuwa iyaga kharashka iska bixiya iyo kuwa Goleha ammuuraha gobolka Gobolka Västmanland bixiya. Dhaqdhaqaaqa waxaa astammo gaar u ah daryeel tayo leh oona leh qaybta quruxda. Waxa ay yihiin ka aqriso shabakadda internetkayga (www.ortendahl.com). Waxaan adeegsanaa qalabyada suuqa ugu casriyeeysan, waxaan soo saarna kuwa cusub. Faramada cusub waxay sababtaa in labada xilli ee bukaan-socodyada ay kala dhaadheeradaan. Kooxda shirkadaha Colosseum waxay leedahay dadyoowga khibradaha leh oo tiro badan. waxaa ka hawlgala kalkaaliyaal leh ka badan 30 sannadood khibrad u leh. Waxaan sannooyin badan ku hawlganay horumarinta qalabka hagaajinta ilkaha, sidaas awgeed waxaan adeegsana qalabyada ugu casriyeeysan. Waxaan leenahay sannooyin khibrad u leh horumarinta aqoonta. Waxaa ka hawlgala waxay ku salaysan yihiin tayo iyo arrimaha deegaanka. qof takhasus wuxuu ahaa qofka dalka Iswiidan ugu horeeyay oo shahaadada tayada hagaajinta ilkaha (ISO) la siiyay. waxay leedahay raajada CBCT u gaar ah, taasoo faro ku tiris ah tirada kliinikayaasha hagaajinta ilkaha ee dalka Iswiidan kaasoo kale qabo. Farsamada daryeel-caafimaadeedka ilkaha waxaa lagu qabta, taasoo bukaan-socodyada hawlaha u sahlinayso. Xilliga sugitaanka daryeelka waa 6-8 toddobaad. 8
Till dig som ska välja vem som ska utföra din tandregleringsbehandling
Information Valfrihet inom tandreglering i Västmanland Till dig som ska välja vem som ska utföra din tandregleringsbehandling 2014-09-11 Hur går valet till? Här finns uppgifter om de olika behandlarna
Information Valfrihet inom tandreglering i Västmanland Till dig som ska välja vem som ska utföra din tandregleringsbehandling Hur går valet till? Här finns uppgifter om de olika behandlarna som har avtal